ယေရှုအသက်ရှင်သည်။ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-02 > ယရှေုသညျဘဝအသက်!
သင်၏ခရစ်ယာန်အသက်တာတစ်ခုလုံးကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည့် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတည်းကိုသာ သင်ရွေးချယ်နိုင်လျှင် မည်သည့်အရာဖြစ်မည်နည်း။ ဤအကိုးကားဆုံးအခန်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်– “ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကကို ချစ်တော်မူသလော။ (ယော ၃:၁၆)။ ကောင်းသောရွေးချယ်မှု။ ကျွန်ုပ်အတွက်မူ အောက်ပါကျမ်းချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကို နားလည်ရန် အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်– “ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်း၊4,20).
သူမသေဆုံးမီညတွင်တပည့်တော်များအားသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကို“ ထိုနေ့၌” ပေးလိမ့်မည်ဟုပြောရုံမကသူသေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်ပျက်တော့မယ်၊ အံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပုံရတယ်။ ဒီစာကြောင်းငယ်သုံးခုကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာသင်ပေးသလဲ။
ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခမည်းတော်နှင့်ရင်းနှီးသော၊ ထူးခြားပြီး အလွန်ထူးခြားသောဆက်ဆံရေးဖြင့် အသက်ရှင်နေပါသည်။ ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏ဝမ်း၌ အသက်ရှင်တော်မူ၏။ “ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်ဖူးသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်ဖြစ် ပြီး ခမည်းတော်၏ရင်ခွင်၌ရှိသော တစ်ပါးတည်းသော သူသည် ယင်းကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်” (ယောဟန်၊ 1,18) ပညာရှင်တစ်ဦးက “တစ်စုံတစ်ယောက်၏ရင်ခွင်၌ရှိခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ရင်ခွင်၌ရှိရန်၊ တစ်စုံတစ်ဦး၏ အရင်းနှီးဆုံးသောဂရုစိုက်မှုနှင့် မေတ္တာထားမှုတို့ဖြင့် ပြည့်နေစေရန် ဆိုလိုသည်” ဟုရေးသားခဲ့သည်။ ယေရှုသည် “ကောင်းကင်ခမည်းတော်၏ဝမ်း၌” ရှိတော်မူ၏။
"မင်းက ငါ့ထဲမှာ!" ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စကားလေးသုံးခွန်း။ ယေရှုဘယ်မှာလဲ။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံရှင်ခမည်းတော်နှင့် အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလိုက်ရပါသည်။ ယခုမူ ယေရှုသည် စပျစ်နွယ်ပင်၌ အကိုင်းအခက်များကဲ့သို့ ငါတို့သည် သူ့အထဲ၌ရှိကြသည်ဟု မိန့်တော်မူသည် (ယော၊ ၁5,1-၈)။ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ခမည်းတော်နှင့် တူညီသောဆက်ဆံရေးတွင်ရှိသည်။ ဤအထူးဆက်ဆံရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပုံကို စူးစမ်းရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပမှ မကြည့်ရက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒါက တကယ်တော့ ဘာအကြောင်းလဲ။ အားလုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ။ နည်းနည်းပြန်ကြည့်ရအောင်။
နှစ်စဉ် အီစတာပွဲတော်သည် ယေရှုခရစ်၏အသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို အမှတ်ရစေသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ယေရှုရဲ့ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘဲ မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားထိုးခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့တစ်ဦးစီ၏ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ သူသေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သူနှင့်အတူ သေဆုံးသွားကြသည်။ သင်္ဂြိုဟ်သောအခါ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် သူနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ ဘုန်းကြီးသောအသက်တာအသစ်သို့ သူထမြောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ထိုဘဝသို့ထမြောက်ခဲ့သည် (ရောမ 6,3စာ-၁၄)။ ယေရှု ဘာကြောင့်သေတာလဲ။ “အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည် သင်တို့အား ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှာ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၌ တခါတည်း အပြစ်ခံရ၍ ခံရသည်ဖြစ်၍၊ ဇာတိပကတိအတိုင်း အသေသတ်ခြင်းသို့ ရောက်သော်လည်း ဝိညာဉ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။”1. ဓာတ်ဆီ 3,18).
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လူများစွာသည် ဘုရားသခင်အား ကောင်းကင်ဘုံတစ်နေရာတွင်နေထိုင်ပြီး အဝေးကကြည့်နေသော အထီးကျန်လူအိုတစ်ဦးအဖြစ် ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကူးကြည့်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ပြသသည်။ သူ၏ကြီးမားသောမေတ္တာကြောင့်၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်နှင့်ပေါင်းစည်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခမည်းတော်ထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ “သင်တို့နေရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ ငါသွားသောအခါ၊ သင်တို့သည်လည်း ငါရှိရာအရပ်ဖြစ်မည်အကြောင်း တဖန်လာ၍ ငါ့ထံသို့ ဆောင်သွားလိမ့်မည်” (ယော၊ ၁။4,3) ကိုယ်တော်၏အထံတော်သို့ရောက်ရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့် သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း သင်သတိပြုမိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ တည်စေတော်မူသည်” (ဧဖက် 2,6) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခမည်းတော်နှင့် သခင်ယေရှုရှိတော်မူသော အထူးထူးခြားပြီး ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည် ထာဝရတည်မြဲနေပါသည်။ ယခု သူတို့သည် တတ်နိုင်သမျှ ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်နေကြပြီး ယေရှုသည် ဤရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ဘဝက မင်းစိတ်ကူးထားတာထက် အများကြီး ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၌ရှိရုံသာမက ကိုယ်တော်သည်လည်း သင်၌ရှိတော်မူ၏။ ၎င်းသည် သင့်အထဲ၌ ကျယ်လာပြီး သင်၌ ကျနေပါသည်။ သူသည် သင်၏နေ့စဉ်ဘဝ၊ သင့်နှလုံးသား၊ အတွေးများနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ရှိနေသည်။ ယေရှုသည် သင့်အထဲ၌ ပုံသွင်းခြင်းဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၄း၁၉)။ သင်သည် ခက်ခဲသောအချိန်များကို ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ယေရှုသည် ၎င်းတို့ကို သင်နှင့် သင်နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ဒုက္ခရောက်သောအခါ၌ ကိုယ်တော်သည် သင့်၌ ခွန်အားဖြစ်တော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီ၏ ထူးခြားမှု၊ အားနည်းမှုနှင့် မခိုင်မြဲမှုများတွင်ရှိပြီး သူ၏ခွန်အား၊ ရွှင်လန်းမှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ ခွင့်လွှတ်မှုတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၌ ထုတ်ဖော်ပြသပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့် အခြားလူများထံ သူ့ကိုယ်သူပြသနိုင်သည့်အတွက် ပျော်ရွှင်ပါသည်။ ပေါလုက “အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်သည် ငါ၏အသက်ဖြစ်တော်မူ၏။ သေခြင်းသည် ငါ့အမြတ်ဖြစ်၏” (ဖိလိပ္ပိ၊ 1,21) ဤအမှန်တရားသည် သင့်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်- သူသည် သင့်ဘဝဖြစ်သောကြောင့် သူ့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် စွန့်လွှတ်သင့်သည်။ သူသည် သင်၌ရှိသောသူဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်လော့။
ယေရှုသည်သင်၌တည်။ သင်လည်းသူ၌ရှိသည်။ သင်ဤဝန်းကျင်၌ရှိနေပြီးသင့်ကိုအားကောင်းစေမည့်အလင်း၊ အသက်နှင့်အာဟာရကိုထိုတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤဝန်းကျင်သည်သင်၌လည်းတည်ရှိသည်၊ ၎င်းမပါဘဲသင်မတည်ရှိနိုင်ဘဲသေဆုံးလိမ့်မည်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်။ ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေထု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ဆုတောင်းချက်တွင်၊ ယေရှုသည် ဤစည်းလုံးမှုကို ပို၍တိကျစွာရှင်းပြသည်။ "သူတို့အတွက်လည်း သမ္မာတရား၌ သန့်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ ငါသည် သူတို့အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ သူတို့၏စကားအားဖြင့် ငါ့ကို ယုံကြည်မည့်သူတို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် ယုံကြည်စေခြင်းငှာ အကျွန်ုပ်၌ရှိ၍ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၌ရှိပါ၏။ တလုံးတဝတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်၍ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုချစ်သကဲ့သို့ သူတို့ကိုချစ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် သိစေခြင်းငှါ၊7,19-23) ။
ဘုရားသခင်၌တလုံးတ ၀ တည်းရှိခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၌တလုံးတ ၀ တည်းရှိခြင်းကိုသင်နားလည်ပါသလား။ ဒါဟာမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ပါ။ သင်၏ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောပါ။